ကံကောင်းသော ခရစ်စမတ်နေ့ ~ Nge Naing
Monday, December 26, 2011 Nge Naing 26 comments
ဘုရားပန်းကို အလျှင်စလို ထိုးပြီးတာနဲ့ ဘုရားရှိခိုးပြီး ထိုင်ကပ်ဖို့တောင် အချိန်မရဘဲ အလုပ်နောက်ကျမှာ စိုးလို့ ရထားမီအောင် အိမ်ကနေ ငါးမိနှစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရတဲ့ ဘူတာရုံကို အပြေးအလွှား လျှောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ရဲ့ လူသွားလူလာနဲ့ ကားသွားကားလာ ပြတ်နေပုံက မသိတဲ့သူဆိုရင် လူနေတဲ့ရပ်ကွက် ဟုတ်ပါ့မလားလို့တောင် ထင်မိမှာ သေချာတယ်။ ခါတိုင်းဆို ရထားသံကို အဝေးကတောင် ကြားနေရပါတယ်။ အခုတော့ လမ်းထိပ်ရောက်လို့ ဘူတာရုံကို လှမ်းမြင်ရတဲ့အထိ ခါတိုင်းလို ဒီဘူတာမှာ မရပ်တဲ့ အမြန်ရထားတွေ တစီးပြီးတစီး ဖြတ်သွားနေခြင်းမျိုး မတွေ့ရ၊ ရထားစောင့်နေတဲ့ ခရီးသည်တွေကိုလည်း တယောက်မှ မတွေ့၊ ဒီနေ့ရထားလမ်း ပိတ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ကြေညာထားတာလည်း မရှိလေတော့ ရထားအလုပ်သမားတွေ သပိတ်မှောက်နေတာများလားမသိ လို့အတွေးဝင်လာကာ စိုးရိမ်သွားတယ်။ ယောက်ျားအလုပ်ကအပြန်ကို စောင့်ပြီး ကားနဲ့လိုက်ပို့ခိုင်းဖို့ စဉ်းစားကြည့်တော့ အိမ်ကို သူပြန်ရောက်မည့်အချိန်က ကျွန်မ ဆေးရုံကိုရောက်ပြီး အလုပ်ဝင်နေရမည့်အချိန် ဖြစ်နေလို့ လမ်းမှာကြာမည့်အချိန်နဲ့ဆို ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရင်ကို တထိန့်တလန့်ကို ဖြစ်သွားတယ်။
ရထားလမ်းပိတ်တာ၊ ရထားအလုပ်သမားတွေ သပိတ်မှောက်တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း လျှောက်လာတာ ဘူတာရုံအဆောက်ဦးပေါ် တက်တဲ့ လှေခါးကို ခြေချမိတဲ့အချိန်ထိ ရထားတစီးမှ ဖြတ်သွားတာ မတွေ့သေးတော့ စိုးရိမ်မှုရေချိန်က ပိုပြီးမြင့်တက်လာတယ်။ အဆောက်ဦးပေါ်ရှိ ရထားလက်မှတ်ဝယ်ရာ ကောင်တာရှေ့ကျွန်မ ရောက်တော့ အမြန်ရထားတစီး တဂျုံးဂျုံးနဲ့ ဖြတ်သွားမှပဲ ဆုတောင်းပြည့်ပြီး စိတ်အေးသွားလို့ သက်ပြင်းချလို့ရသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မစီးမည့်ရထား ရပ်တော့လည်း ရထားတွဲအကုန်လုံးမှာမှ တယောက်စ နှစ်ယောက်စပဲတွေ့ရပြီး ကျွန်မရှေ့က ကျတဲ့ ရထားတွဲထဲမှာ လူတယောက်မှ မရှိတာ တစ္ဆများခြောက်နေလားလို့ ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ကို ခရီးသွားမရှိတာကို တွေ့ရတော့ ဒီဘူတာရုံမှာတင် လူမရှိတာ တခြားဘူတာတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ရထားတတွဲလုံးမှာ ကျွန်မတယောက်ကလွဲရင် တခြားဘယ်သူမှ မရှိတာကတော့ အောက်ကပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အမှန်က ကျွန်မစိုးရိမ်ခဲ့သလို မဟုတ်ဘဲ ရထားမလာတာ အဝေးပြေးရထားတွေ ခရစ်စမတ်ကာလမှာ အလုပ်မလုပ်လို့၊ ဘူတာရုံမှာ လူမရှိတာက မနက်အစောကြီးလည်းဖြစ် ခရစ်စမတ်နေ့မို့ ခရီးသွားလာနည်းနေလို့သာ ဖြစ်တယ်။
ဆေးရုံရောက်ပြီး Nursing Admins အခန်းရှေ့ကို ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်ထိ အလုပ်ထဲမှာ တွေ့တွေ့သမျှ လူနာတွေ Staff တွေကို Merry Christmas လို့ ကျွန်မ နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ နှုတ်ဆက်စကားက အကြိမ်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ကို များပါတယ်။ Ward ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ယူနီဖေါင်းဝတ်တဲ့သူကို တယောက်နှစ်ယောက်ပဲ တွေ့ရပြီး ခရစ်စမတ်အင်္ကျီ၊ ခရစ်စမတ်အမှတ်အသားပါတဲ့ နားဆွဲ၊ ရင်ထိုး၊ မီးကြိုး၊ ဦးထုတ်စတဲ့ တခုခု ၀တ်ဆင်လျက်အသီးသီးတွေ့ရမှ ကျွန်မတယောက်ပဲ ခရစ်စမတ် အထိမ်းအမှတ် ဘာမှမ၀တ်လာပါလားဆိုတာ သတိထားမိသွားတယ်။ ဒါနဲ့သူတို့အထဲက တယောက်စီက ကျွန်မကို ဒါတပ်ထားဆိုပြီး ခရစ်စမတ် မီးကြိုး၊ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ပုံနှစ်ခုကို ဦးချိုလိုလုပ်ထားတဲ့ ဘီးကုတ်တခုနဲ့ ရင်ထိုးတခုကို ပေးတော့ ကျွန်မလည်း ယူတပ်လိုက်မှ သူတို့နဲ့ တသားတည်း ဖြစ်သွားတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာ တွေးမိတာက အာရှကနှစ်ယောက်၊ ဥရောပကတယောက်၊ အန္ဒိယတယောက်၊ အော်စီနှစ်ယေက်ဆိုတော့ တကယ်ကို Multicultural team ပါလားဆိုတာကို သတိထားမိတယ်။
မနေ့က တော်တော်လေး အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ လူနာတွေ ရှိတော့ ဒီနေ့ရေးရမည့်ပို့စ်ဟာ Merry Christmas အစား Sad Christmas လို့ အမည်ပေးရမည့် ခရစ်စမတ်ဖြစ်နေမလားလို့တောင် စိုရိမ်နေမိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အထင်တွေက တခြားစီဖြစ်နေပြီး ထူးထူးခြားခြား ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ရဲ့ ကံကောင်းပုံကို တကယ်ပဲ အမှတ်တရ လုပ်ထားချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို တင်တယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး။ တကယ်လို့ ကျွန်မသာ ခရစ်ယာန်တယောက် ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီနှစစ်ခရစ်မတ်နေ့ရဲ့ ကံကောင်းပုံက ခရစ်တော် (သို့) ဘုရားသခင် တကယ်ကို ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ ထင်မိမှာ သေချာပါတယ်။
ကျွန်မ လတ်တလော တာဝန်ကျနေတာက ကုလို့မရတော့တဲ့ သူတွေအတွက် ဘ၀ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ အကောင်းဆုံး သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံး ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းသွားလို့ရအောင် နှစ်သိပ်ကုသပေးတဲ့ Ward, Palliative Care Unit ဖြစ်တော့ လူနာတွေက တပတ်မှာ အနည်းဆုံး တဦးခန့်တော့ သေဆုံးနေပြီး ရေခဲတိုက်ကို အမြဲတမ်းပို့ရတာရှိပါတယ်။ မနေ့က အသက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ အသက်ငင်နေတဲ့ လူနာတွေက ဒီနေ့မှာ အနည်းဆုံး နှစ်ဦးခန့်တော့ သွားနိုင်ပြီး Merry Christmas လို့ ပြောလို့ ရလောက်တဲ့အခြေအနေ ရှိမယ်လို့တောင် မထင်ထားဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း လူနာတွေဟာ ဒီနေ့မှာ တကယ်ပဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ ပြန်ရှိလာနေတာ တွေ့ပြီး နှစ်ရက်လုံးလုံး သတ်ိလစ်နေတဲ့ လူနာတယောက်တောင် သတိပြန်ရလာလို့ ပန်းသီးရေတောင် နည်းနည်းပြန်သောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ကျန်တဲ့လူနာတွေ အားလုံးကလည်း တော်တော်လေးကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရှိကြတယ်။ ခါတိုင်း မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ဘဲလ်ခဏခဏနှိပ်ပြီး နာ့စ်တွေကို အလုပ်ရှုပ်စေတဲ့ လူနာတွေလည်း ဒီနေ့မှာ ငြိမ်လို့ ဘာမှကိုပြောစရာ မရှိဘူး။ ၊ ရန်လိုပြီး ပစိပစပ်များနေတဲ့ လူနာတွေ အားလုံးကလည်း စိတ်ကောင်းဝင်နေတယ်၊ လူနာမိသားစုတွေထဲကလည်း ပြဿနာလာရှာတဲ့သူတွေ မရှိသလို မေးခွန်းပေါင်း အခါတရာမက လူကိုယ်တိုင် (သို့) ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ် မေးနေလို့ ဖြေရတာတွေလည်း သိပ်မရှိဘူး၊ Ward ထဲက Staff တွေအားလုံးကလည်း တက်ညီလက်ညီနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ အားလုံးကို လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့ပဲ စောစောစီးစီး ပြီးသွားတာ မနေ့ကနဲ့ တခြားစီပဲ။ နောက်တော့ ခရစ်စမတ် နေ့လည်စာအဖြစ် Kitchen staff တွေက တခြား staff တွေ အားလုံးအတွက် Free lunch ပေးတယ်။ ညနေဘက်တာဝန်ကျတဲ့ နာ့စ်တွေကို Handover Report ကို မြန်မြန်ပေးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းမနက်ပိုင်း Staff တွေကို ပေးပြန်တော့ အိမ်ကို အလုပ်ချိန်မပြီးခင် ၄၅ မိနှစ်မှာ ပြန်ခွင့်ရကြတယ်။ အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့ ကျွန်မဟာ အလုပ်ကပြန်လာသလို မဟုတ်ဘဲ ပါတီပွဲတခုက ပြန်လာသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဘူတာရုံနဲ့ ဆေးရုံအကြား လျှောက်လာရင် Auburn Central ကုန်တိုက်ရဲ့ အတွင်းဘက် ရင်ပြင်ပေါ်မှာ ခရစ်မတ်သစ်ပင်ရှိတော့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်လာလိုက်တယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မနေ့က၀ယ်ပြီး ဒီမနက် အလုပ်မသွားခင် ထိုးထားခဲ့တဲ့ အချိန်က ဖူးငုံတွေပဲ ရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားပန်းက အနံ့သင်းသလို အပွင့်တွေအာထွက်လာပြီး ထူးထူးခြားခြား လှပနေတာကို တွေ့ရပြန်တော့ စိတ်ချမ်းသာရပြန်တယ်။ ခါတိုင်းဆို အနံ့ရော အပွင့်တွေ အရွက်တွေပါ ကောင်းတဲ့ ဒီပန်းအမျိုးအစားက ဈေးကြီးလို့ နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေကလွဲရင် တော်တော်နဲ့ မ၀ယ်ကပ်ဖြစ်ဘူး။ အနံ့မပါဘဲ အပွင့်ပဲကောင်းပြီး အရွက်လည်း ညှိုးမြန်တဲ့ လီလီပန်း (သို့) ဂန္ဒမာပန်းပဲကိုပဲ အမြဲတမ်း ၀ယ်ထိုးတာ များပါတယ်။ ဒီပတ်မှာတော့ ဒီပန်းက ပုံမှန်ဆို အနည်းဆုံး တစည်းကို ၁၀ဒေါ်လာခန့် ပေးရပေမဲ့ မနေ့က ခရစ်စမတ်အကြိုနေ့မှာတော့ နှစ်စည်းကို ငါးကျပ်နဲ့ရလို့ အမျိုးသားက ၀ယ်လာပေးလို့ မွှေးကြိုင်လှပစွာ ဘုရားကပ်နိုင်သလို အမြင်အားဖြင့်လည်း ဘုရားစဉ်မှာ အခုလို ဝေေ၀ဆာဆာလေး တွေ့ရတော့ ဒါလည်းပဲ ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့ရဲ့ ကံကောင်းခြင်း တခုပါပဲလားလို့ တွေးပြီး ဒီကံကောင်းမှုတွေ အားလုံးကို ဒီနှစ်ခရစ်မတ် လက်ဆောင်လို့ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာလည်း ဒီနေ့လိုပဲ နေ့တိုင်းကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။
ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ အားလုံး အန္တရယ်ကင်းစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Funeral Service ကို အလောင်းမှားပြီး ထုတ်ပေးမိတဲ့ ကျွန်မတင်တဲ့ ကံမကောင်းသော နေ့တနေ့အကြောင်းလည်း ဒီ Ward ထဲမှာပဲ ဖြစ်သွားပြီး ဒီအကြောင်းကို တင်ထားတာ ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted in: Australian society and environment,Life Style,Nursing (သူနာပြု),ဓါတ်ပုံ
December 26, 2011 at 3:38 AM Reply
ABSDF က မမငယ်နိုင်ရှင့်
မြောက်ပိုင်းက ABSDF ရဲဘော်တွေအချင်းချင်း ရက်ရက်စက်စက်သတ်နေတဲ့ လူသတ်မှုအကြောင်းတွေ တင်ပါအုံး
နောက်ဆုံးတရားခံတွေကို ဘယ်လိုစုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသင့်တယ်ဆိုတာလေးလည်း ထည့်ရေးပေးနော်
December 26, 2011 at 4:21 AM Reply
မင်းတို့စော်ကားတာများပြီ။ ABSDF လောက်ရိုးသားတဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ မြန်မာသမိုင်းမှာ မရှိဘူးကွ..မှတ်ထား။ ဒီမိုကရေစီရေးကအပြင်တခြားဘာမှ မရှိဘူး။ မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေနဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ အကြောက်လွန်ပြီ...ဝိုင်းဖျက်ဆီးကြတာ။
December 26, 2011 at 4:36 AM Reply
ကံကောင်းတဲ့ ခရစ်စမတ်နေ့ ဆိုလို့ ၀မ်းသာတယ် အမရေ... ဘုရားစင်ကလည်း ပန်းတွေနဲ့ အရမ်း သပ္ပာယ် ပါတယ်။
December 26, 2011 at 5:45 AM Reply
Merry Christmas!!! မငယ်နိုင်..
December 26, 2011 at 8:54 AM Reply
ပထဦးစွာ Merry Christmas and Happy New Year to you all. လို့ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပါတယ်။
Anonymous (December 26, 2011 3:38 AM) - အဲဒီအချိန်က တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူ တဦးအနေနဲ့ကော အခုလက်ရှိအထိ နိုင်ရာနဲ့ ABSDF ကို အားပေးနေသူတယောက် အနေနဲ့ပါ သူများတင်ထားတဲ့ fb ကပို့စ်တွေမှာတော့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ၀င်ဆွေးနွေးတာ ရှိပါတယ်။ ABSDF မှာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုပဲ အလျည်းသင့်သလို ရေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဘာမှမသိတဲ့အကြောင်းအရာတခုကို အခုလောလောဆယ်မှာ ကျွန်မ ပို့စ်ရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးဘူး။
Anonymous (December 26, 2011 4:21 AM) မီယာနဲ့ သိင်္ဂါကျော်ရေ Merry Christmas and Happy New Year ပါ။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
December 26, 2011 at 1:30 PM Reply
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်နဲ့အတူ နှစ်သစ်ကူးနေ့လေးကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
December 27, 2011 at 3:49 AM Reply
December 27, 2011 at 3:50 AM Reply
December 27, 2011 at 3:51 AM Reply
December 27, 2011 at 3:53 AM Reply
December 27, 2011 at 5:27 AM Reply
မငယ်နိုင်တို့ တစ်မိသားစုလုံး အားလပ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ...
December 27, 2011 at 5:30 PM Reply
December 28, 2011 at 1:01 AM Reply
December 28, 2011 at 12:35 PM Reply
December 28, 2011 at 1:15 PM Reply
December 28, 2011 at 1:18 PM Reply
January 6, 2012 at 5:04 PM Reply
ကျွန်တော့်နာမည် အာယု ကို အတုလုပ်ပြီး အာယု (6 Jan 12, 03:09 PM) နာမည်နဲ့ ထေ့ငေါ့ သရော်ပြီး မငယ်နိုင်ကို ရေးသွားတာ ကျွန်တော် မဟုတ်ပါ။
January 10, 2012 at 9:03 AM Reply
(6 Jan 12, 06:07 PM)
ဖျက်လိုက်ပြီ ကိုအာယု။ အဲဒီကောင်တွေတော်တော် အားနေပုံရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ... မငယ်နိုင်။
ကျွန်တော့် နာမည် အာယု ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် မဖြစ်ဘဲ မငယ်နိုင်ကို အသားလွတ် တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
January 10, 2012 at 8:20 PM Reply
January 17, 2012 at 1:24 AM Reply
January 17, 2012 at 1:32 AM Reply
အခုဘဲကြည့်၊ ဘာမှ မကြာသေးတဲ့ နှစ် ကာလတွေ တုန်းက လုပ်သွားတဲ့ ညောင်နှစ်ပင်တောင် မသိသူတွေ ရှိနေပြီ။
"မအအောင်လို့ သမိုင်း သင်တာပါ" ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ စကားကို ပြန် အမှတ်ရကြပါ။
အစ်မကြီး ငယ်နိုင် ခင်ဗျား...